M/weyne Putin oo saxiixay sharci qasab ka dhigaya telefanada casriga iyo Tv-yada Smart ay… – Hagaag.com
Posted on 3 Diseembar 2019 by Admin in Technology // 0 Comments
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Isniintii saxiixay sharci qasab ka dhigaya in dhammaan talefannada casriga, kombiyuutarada iyo TV-yada smart-ga ah lagu iibiyo waddanka lagu rakibo App-yada Ruushka kahor inta ayna soo degin si qasab ah.
Sharciga, oo dhaqan gelayaa 1da Luulyo ee sanadka soo socda, ayaa caqabado kala kulmaya qaar ka mid ah tujaarta tafaariiqda ku iibiya elektaroonigga, waxay sheegeen in sharcigan la qaatay iyada oo aan lagala tashan.
Sharciga ayaa loo soo bandhigay si loogu caawiyo shirkadaha teknolojiyada wadaniga ah inay la tartamaan shirkadaha shisheeye, kana hor istaagaan macaamiisha inay soo degsadaan App marka ay iibsanayaan aalad cusub.
Shirkadaha shisheeyaha ayaa horboodaya suuqa telefoonada gacanta ee Ruushka sida Apple, Samsung iyo Huawei.
Sharciga uu saxiixay Putin wuxuu sheegaya in dawladdu soo saari doonto liis App Ruush ah oo loo baahan doona in lagu rakibo aaladaha kala duwan.
Ruushka ayaa wuxuu soo saaray sharciyo adag oo internetka ah sanadihii ugu dambeeyay oo loo baahan yahay SEO inay tirtiraan qaar ka mid ah natiijooyinka raadinta, iyo adeegyada farriimaha si ay ula wadaagaan furayaasha sirta ah ee adeegyada amniga iyo isku xirnaanta bulshada si loogu keydiyo xogta isticmaaleyaasha shabakadaha dalka.